Piompiana omby | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Piompiana omby
Nitaingin-tsoavaly i Vladimir
Toeram-piompiana goavam-be, antsoina hoe "kamiao mavesatra", no fiompiana goavana indrindra. Ny tanjon'io karazana io dia avy amin'ny anarany; Ny fiarabe mahery dia ampiasaina mba hitondra entana mavesatra. Na dia noforonina mba hanatsarana ny zana-trondro hafa aza ny soavaly, tany am-boalohany dia natolotry ny karazan'asa iray hafa, izay tsy misy mitovy aminy.
Ny endri-piainan'ny ondry romanov sy ny soso-kevitra momba ny fambolena
Ho an'ny vahoaka Slavy rehetra, ny karazana hena lehibe indrindra dia ny kisoa, na dia ny tena raibeny aza dia tena mavitrika tokoa amin'ny fampiakarana ondry. Mahasarika ny ankohonany ireo biby ireo, tsy dia betsaka loatra noho ny hena, fa avy amin'ny volony tsara tarehy, mando sy mafana. Ankoatra izany, ny hoditry ny hoditry ny hoditra dia tena manan-danja tokoa, izay mety hahamay na dia ao anatin'ny hatsiaka faran'izay mafy aza.
Sakafo zaridaina: famaritana sy fampiharana
Ny sakafo marevaka dia sakafo matsiro izay tena ampiasain'ny fambolena. Noho ny fampiasana voninkazo mena dia azo atao ny mampitombo ny vokatra vorona sy biby. Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay ny momba ny sakafo voninkazo, ny endriny ary ny fomba tokony hampiasana azy.
Ahoana no fomba hitondran'ny vatomamy amin'ny vatomamy
Ny aretina azo avy amin'ny vatomamy dia iray amin'ireo karazam-pahaizan'ny omby. Soa ihany fa tsy misy fahasarotana goavana ary azo tsaboina tanteraka. Raha miatrika olana toy izany ianao, ary tsy mahafantatra izay tokony hatao, ity lahatsoratra ity dia ho anao. Ny antony mahatonga ny fanorenana Ny vato eo amin'ny ronono dia miforona vokatry ny fiparitahan'ny salady phosphate na amin'ny tranga raha misy calcium avy amin'ny chocolat saline.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Piompiana omby